VaChinamasa Voimba Rumwe Rwiyo paNyaya yeSarudzo
Kubvumbi 29, 2011
Vari kutungamira bato reZanu-PF munhaurirano pakati pematatu matatu ari muhurumende yemubatanidzwa, VaPatrick Chinamasa, vanoti sarudzo dzinogona kuitwa mugore ra 2013 nekuti nyika ichine zvakawanda zviri kuda kuitwa kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo.
Zanu-PF yaimbenge yati iri kuda kuti sarudzo dziitwe gore rino apo rakaita musangano waro weNational Conference muna Zvita gore rapera.
Asi kunyange hazvo mapato aya ari kuti ari kuumba hwaro hwesarudzo, pane zvakawanda zviri muGlobal Political Agreement izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvave kupa kuti nyaya yezvinoda kuitwa pasarudzo isanyatsojeka.
Mugwaro reDraft Elections Roadmap iro riri kubuda mumapepa nhau, mune zvinhu zvakawanda zvisiri kutenderanwa.
Panyaya dzisiri kuwiriranwa, pane nyaya dzakaita seyezvirango, mabatirwo ebasa nemauto nemapurisa uye vasori. MDC inotiwo inoda kuvandudza mutemo wePOSA asi hapana kuwirana neZanu-PF panyaya iyi.
Imwe nyaya iri kutemesa mapato aya musoro inyaya yekuvandudzwa kweZimbabwe Electoral Commission. Zanu-PF iri kurambawo nyaya yekuti vaongorori vesarudzo vapinde munyika mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa.
Zanu-PF iri kurambawo kuvandudza mutemo wePOSA. Pane zviri kuwiriranwa inyaya yekuti zvirango zvibviswe, nhepfenyuro dzekunze dziri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe dzidzoke munyika uye kuti ZBC imire kunyomba vamwe vanopikisa Zanu-PF. Pane kuwirirana zvakare pakuvandudzwa kwemitemo yesarudzo nezvimwe.
Pane kuwirirana zvakare panyaya yekuti VaWelshman Ncube vave ivo vanopinda muhurukuro yevakuru vemapato, kwete mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, VaArthur Mutambara. Asi VaMutambara vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Sachigaro veZanu-PF, VaSimon Khaya Moyo, varamba kutaura nezvemashoko ekuendesa sarudzo mberi vachiti Studio7 itaure navo VaChinamasa mbune kana mutauriri webato ravo, VaRugare Gumbo. Asi hatina kukwanisa kuvabata.
Mutungamiri weMDC, VaMorgan Tsvangirai, neChina vakati sarudzo dzichaitwa mukati memwedzi gumi nemiviri kubva pari zvino.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaTrevor Maisiri, vanovazve Executive Director veAfrica Reform Institute, vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kupatsanura zveGPA nezvehwaro hwesarudzo.